भगवान को राज्य (भाग)) - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
मिडिया > जर्नल उत्तराधिकार > पत्रिका उत्तराधिकारी 2014-04 > परमेश्वरको राज्य (भाग 2)
यो परमेश्वरको राज्यको महत्त्वपूर्ण तर प्रायः गलतफहमी भएको शीर्षकमा ग्यारी डिडोको episode एपिसोड श्रृंखलाको दोस्रो भाग हो। अन्तिम घटनामा हामीले परमेश्वरको राज्यको बारेमा सबै राजाहरूका सर्वोच्च राजा र सर्वोच्च स्वामीको रूपमा येशूको केन्द्रीय महत्त्वलाई हाईलाईट गर्‍यौं। यस लेखमा, हामी बुझ्दछौं कि परमेश्वरको राज्य यहाँ र अहिले कसरी छ भनेर बुझ्ने कठिनाइहरूको बारेमा हेर्नेछौं।
दुई चरणमा परमेश्वरको राज्यको उपस्थिति
बाइबलीय प्रकाशले मेलमिलाप गर्न गाह्रो दुई पक्षहरू बताउँदछ: कि परमेश्वरको राज्य उपस्थित छ तर भविष्यमा पनि। बाइबलीय विद्वान र ईश्वरशास्त्रीहरूले प्राय: ती मध्ये एक लिन्छन् र यसरी दुई पक्ष मध्ये एकलाई विशेष तौल दिएको छ। तर विगत years० बर्ष वा सो भन्दा त्यहाँ यी दुई धारणालाई कसरी राम्रोसँग बुझ्ने भनेर व्यापक सहमति भएको छ। त्यो पत्राचार येशू को हुनुहुन्छ भनेर सम्बन्धित छ।
परमेश्वरको पुत्र लगभग २००० वर्ष अघि भर्जिन मरियमको शारीरिक रूप मा जन्मनुभएको थियो, हाम्रो मानव अस्तित्वमा भाग लिनुभयो र हाम्रो पापी संसारमा years 2000 वर्षसम्म बाँचिरहनुभयो। हाम्रो जन्म प्रकृति देखि आफ्नो मृत्यु सम्म मानव प्रकृति स्वीकार गरेर 1 र यो आफूसित जोड्नुभयो, उहाँ हाम्रो मृत्युको बीचमा पुनरुत्थानसम्म जीवित रहनुभयो, केही दिन पछि मात्र उहाँ शारीरिक रूपमा स्वर्गमा उक्लनुभयो जहाँ उहाँ मानिसहरूसामु देखा पर्नुभयो; त्यो हो, उहाँ हाम्रो मानव अस्तित्वसँग जोडिएर बस्नुभयो, केवल आफ्ना पिताको उपस्थितिमा फर्कने र उहाँसँग पूर्ण सम्बन्ध राख्न। नतिजास्वरूप, अहिले हाम्रो गौरवशाली मानव प्रकृतिको अंश लिने क्रममा, उहाँ अब आफ्नो उपस्थितिभन्दा पहिले जत्तिकै उपस्थित हुनुहुन्न। एक अर्थमा, उहाँ अब पृथ्वीमा हुनुहुन्न। उनले पवित्र आत्मालाई अरु सान्त्वनाकर्ताको रूपमा पठाए ताकि उहाँ हामीसँग रहन सक्नुभयो तर एक स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा उहाँ अब हाम्रो लागि पहिले जस्तो हुनुहुन्न। यद्यपि उनले हामीलाई फर्किने वाचा गरेका छन्।
एकै समयमा, परमेश्वरको राज्यको सार देख्न सकिन्छ। यो वास्तवमा येशूको सांसारिक सेवकाईको समयमा "नजीक" र प्रभावकारी थियो। यो यति नजीक र मूर्त थियो कि यसले तत्काल प्रतिक्रिया माग्छ, जसरी येशू आफैंले उहाँ बाट विश्वास को रूप मा हामी बाट एक प्रतिक्रिया माग्नुभयो। तथापि, उहाँले हामीलाई सिकाउनुभएझैं, उहाँको शासन पूर्ण रूपमा सुरु भएको थिएन। यो पूर्ण रूपमा वास्तविकता बन्न बाँकी थियो। र त्यो ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा हुनेछ (प्रायः उहाँको "दोस्रो आगमन" भनेर चिनिन्छ)।
तसर्थ, परमेश्वरको राज्यमाथिको विश्वास पूर्णतया साकार हुने आशाको साथ जोडिएको छ। यो येशूमा पहिले देखि नै थियो र आफ्नो पवित्र आत्माको कारण यो रहन्छ। तर यसको पूर्णता अझै आउन बाँकी छ। यो प्राय: व्यक्त गरिन्छ जब यो भनिन्छ कि परमेश्वरको राज्य पहिले नै अवस्थित छ, तर अझै यसको पूर्णतामा छैन। जर्ज लाडको ध्यानपूर्वक अनुसन्धान गरिएको कामले यस भनाइलाई धेरै भक्त मसीहीहरूको दृष्टिकोणबाट समर्थन गर्दछ, कम्तिमा अ least्ग्रेजी बोल्ने संसारमा।
परमेश्वरको राज्य र दुई युगहरु
बाइबलीय बुझाइ अनुसार, दुई समय, दुई युग वा युगहरू: वर्तमान "दुष्ट संसारको समय" र तथाकथित "आउने विश्व समय" बीचको स्पष्ट भिन्नता छ। यहाँ र अब हामी वर्तमान "दुष्ट संसार समय" मा बाँचिरहेका छौं। आउँदै गरेको विश्व समयको आशामा हामी बाँचिरहेका छौं, तर हामीले अझै अनुभव गरेका छैनौं। बाइबलीय रूपमा भन्नुपर्दा, हामी अझै पनि वर्तमान खराब समयमा बाँचिरहेका छौं - त्यो अन्तरिम समयमा। बाइबलीय खण्डहरु कि स्पष्ट रूप देखि यस दृष्टिकोण को समर्थन को रूप मा निम्नानुसार छन् (जब सम्म अन्यथा भनिएको छैन, निम्न बाइबलीय उद्धरण ज्यूरिख बाइबल बाट छन्।):
उसले यो शक्ति ख्रीष्ट मा काम गर्न दियो जब उसले उसलाई मृत्यु बाट उठायो र उसलाई उसको दाहिने हात मा स्वर्ग मा राखीयो: प्रत्येक रेजिमेन्ट माथि, हरेक शक्ति, अधिकार र प्रभुत्व र प्रत्येक नाम माथि, न केवल यो मा तर आउँदै छ। विश्व समय भनिन्छ » (एफेसी १:२०-२१)।
"हाम्रा पिता परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टबाट अनुग्रह र शान्ति, जसले हाम्रा पापहरुको खातिर आफैंलाई त्याग्नुभयो, ताकि हाम्रा बुबा परमेश्वरको इच्छा अनुसार वर्तमान दुष्ट संसारको समय बाट हामीलाई भगाउन सकौं" (गलातीहरु १:३-४)।
"साँच्‍चै म तिमीहरूलाई भन्‍दछु: कसैले पनि परमेश्‍वरको राज्‍यको खातिर घर वा पत्‍नी, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमाबुबा वा छोराछोरी छोडेका छैनन्, जसले यस लौकिकतामा, र भविष्यमा अनन्त संसारमा फेरि धेरै बहुमूल्य चीजहरू प्राप्त गर्दैनन्। जीवन" (लूका 18,29:30; भीड-बाइबल)।
"यो संसारको अन्त्यमा यस्तो हुनेछ: स्वर्गदूतहरु बाहिर जानेछन् र दुष्टहरुलाई धर्मीहरु बाट अलग पार्नेछन्" (मत्ती १३:४;; भीड बाइबल)।
"[कसैले] परमेश्वरको असल वचन र आउने संसारका शक्तिहरूको स्वाद चाखेका छन्" (हिब्रू ६:५)।
युग वा युगहरूको यो अस्पष्ट बुझाइ दुर्भाग्यवश कम स्पष्ट रूपमा यस तथ्यद्वारा व्यक्त गरिएको छ कि "उमेर" (aion) को लागि ग्रीक शब्द विभिन्न तरिकामा अनुवाद गरिएको छ, उदाहरणका लागि "अनन्तता", "संसार", "सदाका लागि", र "a"। धेरै समय पहिला"। यी अनुवादहरूले समयलाई अनन्त समयसँग, वा यो पार्थिव राज्यलाई भविष्यको स्वर्गीय राज्यसँग भिन्नता दिन्छ। जबकि यी अस्थायी वा स्थानिक मतभेदहरु पहिले नै बिभिन्न युग वा युगहरु को विचार मा शामिल गरीएको छ, यो विशेष गरी गुणस्तरीय जीवन को अब र भविष्य मा एक धेरै धेरै दूरगामी तुलना मा जोड दिन्छ।
केही अनुवादहरूमा हामी पढ्छौं कि निश्चित माटोमा उम्रने बीउहरू "यस संसारको चिन्ता" (मर्कूस 4,19:12,2) द्वारा कोपिलामा निस्किन्छन्। तर ग्रीक aion मूल पाठमा भएकोले, हामीले "यस वर्तमान दुष्ट संसारको समयको चिन्ताले कोपिलामा निस्किएको" अर्थ पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। रोमी १२:२ मा पनि, जहाँ हामी पढ्छौं कि हामी यस "संसारको योजना" अनुरूप हुन चाहँदैनौं, यो पनि यसरी बुझ्नु पर्छ कि हामी यस वर्तमान "संसार समय" सँग मिल्दैन। ।
"अनन्त जीवन" भनेर अनुवाद गरिएको शब्दले आउँदो समयमा जीवनलाई पनि सly्केत गर्दछ। माथि उल्लिखित लुका १ 18,29: २ -30 -०को सुसमाचारमा यो कुरा स्पष्ट हुन्छ। अनन्त जीवन "सँधै" भइरहेको हुन्छ, तर यसले यसको अवधि भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्दछ, जुन यो वर्तमान दुष्ट युगको तुलनामा धेरै लामो छ! यो जीवन हो जुन पूर्ण भिन्न युग वा युगको साथ सम्बन्धित छ। भिन्नता केवल एक असीमित लामो जीवनको तुलनामा छोटो अवधिमा मात्र होईन, बरु जीवनको बीचमा जुन पापीपन - दुष्ट, पाप र मृत्युले देखाउँदछ - हाम्रो वर्तमान समय र भविष्यमा भविष्यमा, जुनमा सबै ट्रेसहरू छन्। दुष्टको छुटकारा हुनेछ। भविष्यमा त्यहाँ नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी आउनेछ जुन नयाँ सम्बन्धलाई जोड्नेछ। यो एक पूर्ण भिन्न तरीका र जीवनको गुणस्तर, परमेश्वरको जीवन शैली हुनेछ।
परमेश्वरको राज्य अन्ततः आउने समयसँग मिल्दछ, त्यो अनन्त जीवन र ख्रीष्टको दोस्रो आगमन। ऊ फर्केर नआउन्जेल हामी वर्तमान दुष्ट संसारमा बाँचिरहेका छौं र भविष्यको लागि आशा गर्दछौं। हामी पापी संसारमा बाँचिरहेका छौं जसमा, ख्रीष्टको पुनरुत्थान र स्वर्गारोहणको बाबजुद पनि, कुनै कुरा सही छैन, सबै थोक सब भन्दा इमान्दार छ।
छक्कलाग्दो कुरा के छ भने, हामी वर्तमान दुष्ट समयमा बाँचिरहेका छौं, भगवानको अनुग्रहले धन्यवाद, हामी केही हदसम्म अब परमेश्वरको राज्यको अनुभव गर्न सक्छौं। यो पहिले नै यहाँ छ र अब एक खास तरिका मा वर्तमान दुष्ट युग को प्रतिस्थापन अघि।
सबै धारणाहरूको विपरीत, परमेश्वरको भविष्यको राज्य अन्तिम न्याय र यस समयको अन्त्य बिना वर्तमानमा टुक्रिएको छ। परमेश्वरको राज्यले यहाँ र अहिले आफ्नो छायाँ छाड्छ। हामी यसको पूर्वाभास पाउँछौं। उहाँका केही आशीर्वाद यहाँ र अहिले हामीलाई आउँछन्। र हामी ख्रीष्टसँगको सङ्गति कायम गरेर यहाँ र अहिले यसमा भाग लिन सक्छौं, यदि हामी अझै यस समयसँग संलग्न रह्यौं भने पनि। यो सम्भव छ किनकि परमेश्वरको पुत्र यस संसारमा आउनुभयो, आफ्नो मिशन पूरा गर्नुभयो र हामीलाई उहाँको पवित्र आत्मा पठाउनुभयो, भलेपनि उनी अब शारीरिक छैनन्। हामी अहिले उहाँको विजयी शासनको पहिलो फलको आनन्द लिइरहेका छौं। तर ख्रीष्ट फर्कनु अघि त्यहाँ एक अन्तरिम अवधि (वा "अन्तिम समय पज" हुनेछ, जसरी TF टोरेन्सले यसलाई भनिन्छ) जसको अवधिमा परमेश्वरको उद्धार प्रयासहरू यस समयमा जारी रहनेछन्।
धर्मशास्त्रको शब्दावलीको आधारमा, बाइबल विद्यार्थी र धर्मविद्हरूले यस जटिल अवस्थालाई वर्णन गर्न विभिन्न शब्दहरू प्रयोग गरेका छन्। जर्ज लाडको अनुसरण पछि धेरैले यस विवादास्पद बिन्दुलाई उठाउँदै यो बताए कि प्रभुको प्रभुत्व येशूमा पूरा भइसकेको छ, तर उहाँ फिर्ता नभएसम्म यो हुने छैन। परमेश्वरको राज्य पहिले नै अवस्थित छ, तर यो अझै पूर्ण रूपमा महसुस भएको छैन। यस गतिशीललाई पनि यसरी व्यक्त गर्न सकिन्छ कि परमेश्वरको राज्य सुरु भइसकेको छ, तर हामी यसको समाप्तिको लागि कुर्दै छौं। यस अवधारणालाई कहिलेकाँही "वर्तमान एस्केटोलोजी" भनेर पनि चिनिन्छ। भगवानको अनुग्रहले धन्यवाद, भविष्य पहिले नै वर्तमानमा सारिएको छ।
यसको प्रभाव यो हो कि ख्रीष्टले गर्नु भएको सम्पूर्ण सत्यता र त्याग वर्तमानमा मूल दृष्टिकोणबाट बाहिर छ, किनकि हामी अझै मानव जीवनको पतनले ल्याएको परिस्थितिमा बाँचिरहेका छौं। वर्तमान दुष्ट संसारमा, ख्रीष्टको शासन पहिले देखि नै वास्तविकतामा छ, तर लुकेको छ। भविष्यमा, परमेश्वरको राज्य पूर्ण रूपले महसुस हुनेछ किनकि पतनको बाँकी रहेका परिणामहरू रद्द हुनेछन्। ख्रीष्टको सेवकाईका सम्पूर्ण प्रभावहरू त सबै महिमामा जताततै प्रकट हुनेछन्।2यहाँ गरिएको भिन्नता लुकेको राज्य र परमेश्वरको राज्यको बीचमा हो जुन अहिलेसम्म पूर्ण रूपले महसुस भएको छैन, र वर्तमानमा प्रकट नभएको र विचाराधिन राज्यको बीचमा होईन।
पवित्र आत्मा र दुई युगहरु
परमेश्वरको राज्यको यो दृष्टिकोण पवित्र आत्माको व्यक्ति र कामको बारेमा पवित्र धर्मशास्त्रमा प्रकट भएको जस्तै छ। येशूले पवित्र आत्माको आगमनको प्रतिज्ञा गर्नुभयो र उहाँलाई पिता संग हामी संग हुन पठाउनुभयो। उहाँले आफ्नो पवित्र आत्मा चेलाहरूमा सास फेर्नुभयो, र पेन्तिकोस्टमा भेला भएका विश्वासीहरूमा यो तल आयो। पवित्र आत्माले प्रारम्भिक क्रिस्चियन मण्डलीलाई ख्रीष्टको सेवकाईलाई सत्यताका साथ गवाही दिन र यसैले अरूलाई ख्रीष्टको राज्यमा आफ्नो बाटो पत्ता लगाउन सक्षम बनाउनुभयो। उहाँले परमेश्वरका मानिसहरूलाई सारा संसारमा परमेश्वरको पुत्रको सुसमाचार प्रचार गर्न पठाउनुहुन्छ। हामी पवित्र आत्माको मिशनको भाग हौं। यद्यपि, हामी अझै यसको बारेमा पूर्ण रूपमा सचेत छैनौं र आशा छ कि यो एक दिन हुनेछ। पावलले बताउँछन् कि आजको अनुभवको संसार केवल शुरुवात हो। उसले आंशिक अग्रिम उपहारको विचार व्यक्त गर्न अग्रिम वा प्रतिज्ञा वा जम्मा (अरेबोन) को छवि प्रयोग गर्दछ, जसले पूर्ण उपहारको लागि सुरक्षाको रूपमा काम गर्दछ (२ कोरिन्थी १:२२; ५.५)। नयाँ नियमभरि प्रयोग गरिएको विरासतको छविले हामीलाई अहिले यहाँ केही दिइएको छ र अब त्यो भविष्यमा हाम्रो आफ्नै हुने निश्चित छ भनेर पनि सुझाव दिन्छ। यसबारे पावलका शब्दहरू पढ्नुहोस्:
"उहाँमा [ख्रीष्ट] हामी उत्तराधिकारीहरू पनि नियुक्त भएका छौं, जसलाई उहाँको उद्देश्य अनुसार गर्न पूर्वनिर्धारित गरिएको छ जसले उहाँको इच्छाको सल्लाह अनुसार सबै काम गर्दछ [...] जो हाम्रो उत्तराधिकारको प्रतिज्ञा हुनुहुन्छ, हाम्रो लागि। छुटकारा, कि हामी उहाँको सम्पत्ति उहाँको महिमाको प्रशंसा बन्नेछौं [...] र उहाँले तपाईंलाई हृदयको उज्यालो आँखा दिनुहोस्, ताकि तपाईंले उहाँबाट के आशा राख्नुहुन्छ भनेर जान्न सक्नुहुन्छ, उहाँको उत्तराधिकारको महिमा कति धनी छ। सन्तहरू" (एफिसी 1,11:14,18;)।
पावलले छविको प्रयोग पनि गर्दछ जुन अनुसार हामीलाई अब केवल पवित्र आत्माको "पहिलो फल" दिइन्छ, तर यसको सम्पूर्णता होइन। हामीले हाल फसलको शुरुवात मात्र अनुभव गरिरहेका छौं र अझै यसको सबै उपहारहरू (रोमी 8,23:6,4)। अर्को महत्त्वपूर्ण बाइबलीय रूपक भनेको भविष्यको उपहारलाई "चख्नु" हो (हिब्रू ६:४-५)। आफ्नो पहिलो पत्रमा, पत्रुसले पज्जलका धेरै टुक्राहरू सँगै राख्छन् र त्यसपछि पवित्र आत्माद्वारा धर्मी ठहरिएकाहरूको बारेमा लेख्छन्:
“परमेश्‍वरको प्रशंसा होस्, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका पिता, जसले उहाँको महान् कृपा अनुसार, मरेकाहरूबाट येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान मार्फत हामीलाई जीवित आशामा पुनर्जन्म दिनुभएको छ, एउटा अविनाशी र बेदाग र अविनाशी सम्पदा जो संरक्षित छ। तिम्रो लागि स्वर्ग, तिमी जो परमेश्वरको शक्तिले विश्वासद्वारा मुक्तिको लागि सुरक्षित राखिएको छ, जुन अन्तिम समयमा प्रकट हुन तयार छ" (1 Pt 1,3-5)।
हामीले पवित्र आत्मालाई अहिले जुन तरिकाले महसुस गर्छौं, उहाँ हाम्रो लागि अपरिहार्य छ, यद्यपि हामी उहाँबारे पूर्ण रूपमा सचेत छैनौं। अब हामी यसको कामको अनुभव गर्ने तरीकाले यसले अझ ठूलो विकासलाई देखाउँदछ जुन एक दिन आउँनेछ। उहाँबारे हाम्रो वर्तमान धारणाले आशा फिड गर्दछ जुन निराश हुनेछैन।
यो वर्तमान दुष्ट संसार समय
हामी अहिले वर्तमान दुष्ट संसारमा बाँचिरहेका छौं भन्ने महत्त्वपूर्ण अनुभूति हो। ख्रीष्टको सांसारिक काम, यद्यपि यो विजयी अन्तमा ल्याइएको थियो, यस समय वा युगमा मानिसको पतनका सबै पछिल्ला प्रभावहरू र परिणामहरूलाई अझै मेटाउन सकेको छैन। त्यसैले हामीले येशूको पुनरागमनले तिनीहरू निभाउने आशा गर्नु हुँदैन। ब्रह्माण्ड (मानव जाति सहित) को निरन्तर पापी प्रकृति को बारे मा नयाँ नियम द्वारा दिइएको गवाही अधिक सताउन सक्दैन। उहाँको प्रधान पुजारी प्रार्थनामा, जुन हामीले यूहन्ना 17 को सुसमाचारमा पढ्छौं, येशूले प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि हामी हाम्रो वर्तमान अवस्थाबाट मुक्त हुन सक्दैनौं, यद्यपि उहाँलाई थाहा छ कि हामीले यस समयमा दुःख, अस्वीकार र सतावट सहनु पर्छ। माउन्टमा आफ्नो प्रवचनमा उहाँले औंल्याउनुहुन्छ कि यहाँ र अहिले हामीले परमेश्वरको राज्यले हाम्रो लागि भण्डारमा राखेका अनुग्रहका सबै उपहारहरू प्राप्त गर्न सकेका छैनौं, र हाम्रो भोक, न्यायको लागि हाम्रो तिर्खा अझै तृप्त छैन। बरु, हामीले उहाँलाई प्रतिबिम्बित गर्ने सतावट अनुभव गर्नेछौं। जसरी उहाँले स्पष्ट रूपमा बताउनुहुन्छ कि हाम्रो चाहना पूरा हुनेछ, तर आउने समयमा मात्र।
प्रेरित पावल औंल्याउँछन् कि हाम्रो साँचो स्वयम् खुला किताब को रूप मा प्रस्तुत गरिएको छैन, तर "भगवान मा ख्रीष्ट संग लुकेको छ" (कलस्सी ३: ३)। लाक्षणिक रूपमा भन्नुपर्दा हामी ख्रीष्टको उपस्थितिको महिमा समावेश गर्ने माटोका भाँडाहरू हौं, तर सबै महिमामा तिनीहरूको भागको लागि अझै प्रकट गरिएको छैन (२ कोरिन्थी ४:७), तर कुनै दिन मात्र (कलस्सी ३:४)। पावलले औंल्याए कि "यस संसारको सार बितिँदैछ" (कोरिन्थी 3,3:2; cf. 4,7 यूहन्ना 3,4: 7,31; 1), तर यो अझै आफ्नो अन्तिम लक्ष्यमा पुगेको छैन। हिब्रूहरूलाई पत्रको लेखकले सजिलै स्वीकार गर्दछन् कि अहिले सम्म सबै कुरा स्पष्ट रूपमा ख्रीष्ट र उहाँको आफ्नै अधीनमा छैन (हिब्रू २:८-९), ख्रीष्टले संसार जितिसके पनि (यूहन्ना १६:३३)।
रोमको मण्डलीमा लेखिएको आफ्नो पत्रमा, पावलले कसरी सबै सृष्टि "रुन्छ र डराउँछ" र कसरी "आत्मालाई पहिलो फलको वरदानको रूपमा पाएका छौं, हामी आफैं भित्रै रुन्छौं र पुत्रत्व, हाम्रो छुटकाराको शरीरको लागि उत्सुक छौं" (रोमी ८। : २२-२३)। यद्यपि ख्रीष्टले आफ्नो सांसारिक सेवा पूरा गर्नुभएको छ, तर हाम्रो वर्तमान अस्तित्वले उहाँको विजयी शासनको पूर्णतालाई प्रतिबिम्बित गर्दैन। हामी यो वर्तमान दुष्ट समयमा अलपत्र रहन्छौं। परमेश्वरको राज्य अवस्थित छ, तर अझै यसको पूर्णतामा छैन। अर्को अंकमा हामी परमेश्वरको राज्यको आउँदो समापन र बाइबलीय प्रतिज्ञाहरूको पूर्ण पूर्तिको लागि हाम्रो आशाको सारलाई हेर्नेछौं।
गैरी डिड्डो द्वारा
1 हिब्रू २:१ In मा हामी ग्रीक शब्द इपिल्याम्नेताई भेट्छौं, जुन "स्वीकार" को रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, "मद्दत" वा "चिन्तित" को रूपमा होइन। हिब्रू::,, जहाँ उही शब्द मिश्री दासत्वको चंगुलबाट इस्रायलको छुटकाराको लागि प्रयोग गरिएको छ।
2 नयाँ नियममा यसको लागि प्रयोग भएको ग्रीक शब्द र त्यो अन्तिम पटक उसको अन्तिम पुस्तकको नामकरणको साथ जोड दिइएको छ apocalypsis हो। यो lation प्रकटीकरण with को साथ हुन सक्छ,
"प्रकाश" र "आउँदैछ" अनुवादित छन्।